Samsung kwetara ịkwụ Apple $ 584 nde. maka imebi ikike nchọpụta | Esi m mac
Samsung kwenyere ịkwụ Apple $ 584 nde. maka ịda iwu patent
Samsung emechaala kweta ịkwụ Apple karịrị $ 500 million na-emebi, niile na-amụba nke ogologo oge agha maka patent ngabiga n’etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ. Companylọ ọrụ South Korea ekwenyela na nkwupụta na ọ ga-enye Apple $ 548.176.477.
Nkwekọrịta ahụ na-abịa mgbe Courtlọikpe Mkpegharị Ikpe nke Federal jụrụ ịnakwere arịrịọ Samsung maka ọhụụ ọhụrụ n'ọnwa gara aga. Hopedfọdụ nwere olile anya na Samsung ga-eweghara okwu ikpe ya na Courtlọikpe Kasị Elu, mana mgbe ụlọ ọrụ abụọ ahụ mechara mkpebi, Samsung mechara kwenye ịkwụ ụgwọ mmebi. Lee, anyị hapụrụ gị a Ihe onyonyo na-egosi ebe etinyere ikike imebi iwu.
Ugbu a, ọ na-echere akwụkwọ ọnụahịa mbụ sitere n'aka Apple, a na-atụ anya na ọ ga-erute ndị ya na Korea na-agba izu tupu izu ụka, ka ha nwee ike izipu Apple $ 548 nde na Disemba 14, ka Florian Mueller na-akọ.
Apple na-alụ ọgụ Samsung na n'ụlọ ikpe ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ise, mgbe ọ gbara ndị na-emepụta Korea akwụkwọ idetuo imewe nke iPhone na ya software ọrụ (foto dị n'elu). Na August 2012, ndị juri hụrụ Samsung ka ikpe mara na Apple na-akwụ ụgwọ $ 1.05 ijeri na nbibi, mana ọnụọgụgụ ahụ belataworị na nyocha ọhụrụ.
Samsung ga-akwụ ụgwọ, mana ego gị nwere ike ịlaghachi azụ ma ọ bụrụ na ọchịchị na-agbanwe n'oge ọ bụla. Ọ dị ka Samsung ga-aga n'ihu na-alụ ọgụ n'ụzọ ụfọdụ, ikekwe site na itinye ngwa na ya Lọikpe Kasị Elu nke United States. maka gịnị lelee nhazi maka mmebi patent.
Anyị nwere ike ịnụbeghị ihe kachasị ọhụrụ na nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Samsung kwenyere ịkwụ Apple $ 584 nde. maka ịda iwu patent
Apple na-arụ ọrụ na Apple TV 5 na nnukwu mmelite na CPU
Onye ori mmiri: Onyinyo mbipụta kụrụ Mac App Store taa